ZFS Linux Developers nanampy fanampiana ho an'ny FreeBSD | Avy amin'ny Linux
mpandraharaha izay miandraikitra ny kaody fototra "ZFS amin'ny Linux" izay novolavolaina teo ambany fiahian'ny tetikasa OpenZFS ho fampiharana ny ZFS, vao haingana izy ireo no namoaka ny vaovao amin'ny inona nandray fanovana vitsivitsy izay manampy fanampiana ny rafitra fiasa FreeBSD.
Ny kaody nampidirina tao amin'ny "ZFS amin'ny Linux" dia notsapaina tamin'ny FreeBSD sampana 11 sy 12. Noho izany, ny mpamorona FreeBSD dia tsy mila mitazona ny sampana "ZFS amin'ny Linux" ampiarahina aminy intsony ary ny fampandrosoana ny fanovana rehetra mifandraika amin'ny FreeBSD dia hitranga amin'ny tetikasa lehibe.
Ankoatr'izay, aryl FreeBSD fampisehoana ny sampana lehibe "ZFS amin'ny Linux" mandritra ny fampandrosoana se hosedraina amin'ny rafitra fampidirana mitohy.
Tadidio fa en Desambra 2018, nandray andraikitra tamin'ny fanovana ireo mpamorona FreeBSD amin'ny fampiharana ny ZFS avy amin'ny tetikasa ZFS amin'ny Linux (ZoL), izay manodidina ny hetsika rehetra mifandraika amin'ny fampandrosoana ny ZFS dia nifantoka tato ho ato.
Ny anton'ny fifindra-monina dia ny faravodilan'ny codebase ZFS an'ny tetikasa Illumos (fork an'ny OpenSolaris), izay nampiasaina taloha ho fototry ny famindrana ireo fanovana mifandraika amin'ny ZFS amin'ny FreeBSD.
Hatramin'izao dia Delphix, orinasam-pampandrosoana ho an'ny rafitra fiasa DelphixOS, no nanao ny anjara birikiny lehibe indrindra hanohanana ny codebase ZFS amin'ny Illumos (fork of Illumos). Roa taona lasa izay dia nanapa-kevitra ny hivadika amin'ny ZFS amin'ny Linux i Delphix, mandrisika el ZFS fivarotana ny tetikasa Illumos ary ny fifantohana amin'ireo hetsika mifandraika amin'ny fampandrosoana amin'ny tetikasa ZFS amin'ny Linux, izay heverina ho fampiharana voalohany indrindra amin'ny OpenZFS.
Hatramin'ny fampiharana ZFS an'ny Illumos ya dia ao ambadiky ny "ZFS amin'ny Linux" raha ny fampiasa, Tonga saina ireo mpamorona FreeBSD izany ny vondrom-piarahamonina FreeBSD tsy nanana tanjaka ampy hitazomana sy hivelarana tsy miankina ny fototra kaody efa misy. Raha manohy mampiasa Illumos ianao dia hitombo ihany ny elanelana amin'ny fampiasa ary ny famindrana ireo fanamboarana dia mila loharano bebe kokoa.
Raha tokony hiezaka ny hihazona Illumos ianao, ny ekipa mpanohana ZFS ao amin'ny FreeBSD dia nanapa-kevitra ny handray ny "ZFS amin'ny Linux" Amin'ny maha tetik'asa fampandrosoana ifarimbonana lehibe ho an'ny ZFS, alefaso ny loharanom-pahalalana misy mba hampitombo ny fahafahan'ny kaody anao ary hampiasa ny kaody kaody ho fototry ny fampiharana ny ZFS ho an'ny FreeBSD. Ny fanampiana FreeBSD dia hampidirina mivantana ao amin'ny kaody "ZFS amin'ny Linux" ary hivelatra indrindra ao amin'ny trano fitahirizana ity tetikasa ity (ny olana momba ny fampandrosoana iraisana amin'ny trano fitahirizana tokana dia efa nifanarahana tamin'i Brian Behlendorf, mpitarika ny tetikasa ZFS amin'ny Linux).
FreeBSD Developers nanapa-kevitra ny hanaraka ohatra iraisana ary tsy hiezaka ny hihazona Illumos, satria io fampiharana io dia efa taraiky lavitra amin'ny fampiasa ary mitaky loharanon-karena lehibe hitazonana ny kaody ary hamindra ny fanovana.
Ny "ZFS amin'ny Linux" dia hita ankehitriny ho tetikasa fampandrosoana fiaraha-miasa lehibe tokana amin'ny ZFS.
Anisan'ireo fiasa izay hita ao amin'ny "ZFS amin'ny Linux" ho an'ny FreeBSD, saingy tsy misy amin'ny fampiharana Illumos ny ZFS, dia ny mode multihost (MMP, Multi Modifier Protection), rafitra quota iray nitarina, ny famakafakana andiana data, ny fisafidianana misaraka ny kilasy fizarana ho an'ny sakana (kilasy fizarana), ny fampiasana torolàlana mpanamboatra volo ho fanafainganana ny fampiharana RAIDZ sy ny fikajiana ny checkums, ny fanatsarana ny fitaovana enti-baiko ary ny fanamboarana bibikely maro mifandraika amin'ny toe-piainana.
Noho izany ny fanohanan'ny FreeBSD ho an'ny ZoL dia hanamora ny fihetsiky ny fiovana eo amin'ny FreeBSD sy Linux, ho fanampin'ireo mpandraharaha milaza fa hisy fanatsarana sasany, izay resahina ao koa:
manafatra FreeBSD SPL
ampio ifdefs amin'ny kaody iraisana izay misy dikany bebe kokoa ny fanaovana izany toy izay ny fanaovana kopia ny kaody amin'ny fisie samihafa
Farany eny te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao, azonao atao ny manamarina ny antsipiriany ao ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Nanampy ny FreeBSD ny mpamorona ZFS Linux
Tanisao ny kinova vaovao an'ny mpitantana fonosana GNU Guix 1.1